ingqokelela ihotele uphononongo lomatrasi - Rayson
ingqokelela ihotele uphononongo lomatrasi
Ukho kwindawo efanelekileyo ingqokelela ihotele uphononongo lomatrasi.Okwangoku sele uyazi ukuba, nantoni na oyikhangelayo, uqinisekile ukuyifumana Rayson.siqinisekisa ukuba ilapha Rayson.
Umvelisi weRayson Spring Mattress ukhokelela ekubambeni imeko yophuhliso lweshishini..
Sijonge ukubonelela ngomgangatho ophezulu ingqokelela ihotele uphononongo lomatrasi.kubathengi bethu bexesha elide kwaye siya kusebenzisana ngokubonakalayo nabathengi bethu ukubonelela ngezisombululo ezifanelekileyo kunye neendleko zeendleko.
Umthengisi oMkhulu weFlorida oMkhulu wePlush yoMbane
I-Rayson kwi-Rayson Zone Industrial Zone, Huasha Road, Shishan, Foshan High-Tech Zone, Guangdong, China. Iimveliso eziphambili I-Euro ephezulu yeXabiso laseMgangathweni kwi-Plush King size. I-Euro ephezulu yeXabiso eliKhulu lePlush King Matress Rayson Spring Matress uMvelisi onoluhlu lwemigca yobungcali kunye nemveliso egqibeleleyo. Umvelisi weRayson Spring Mattress unendawo yokugcina izinto kakuhle. I-Euro ephezulu ye-Luxury Plush King ubukhulu Matress Ukusebenzisa le mveliso kuphelisa isidingo sokuqesha ingcibi yokulungisa iiphuli ukuze wenze uninzi lomsebenzi wokugcina.
I-Latex Pillow ephezulu 3 Imimandla ye-Pocket Spring Mattress + I-Latex Pillow ephezulu 3 Imimandla yePocket Spring Mattress, https: //www.raysonglobal.com.cn
Eyona ndawo intle yoQeqsho lweXabiso loKhuseleko lweKing
I-Rayson kwi-Rayson Zone Industrial Zone, Huasha Road, Shishan, Foshan High-Tech Zone, Guangdong, China. Ezona mveliso ziXabiso liPhezulu zoKhuthazo lwezoQoqo kweKing King Hotel. I-Comfort Comical King Ubungakanani behotele iMathematics Imveliso ifunwa kakhulu kubomi babantu okanye emsebenzini. Isetyenziswe ngokubanzi indawo yokuhlala, urhwebo kunye nemizi-mveliso. I-Rayson iphuhliswa phantsi kweetekhnoloji eziphambili. Yenziwe kusetyenziswa i-CAD, yenziwa yitekhnoloji ye-CNC, kwaye ilawulwa yitekhnoloji yenzwa. I-Comfort King Enobungakanani Yezoqoqosho Ihotele iMathematics FAQ: 1.Nayiphi na inkampani orhweba ngayo? Sikwimizi-mveliso, sisebenza ngokukhethekileyo kwimatriki, kwilaphu elingengalukwanga nakwimithombo engaphezu kweminyaka eli-10.kwangelo xesha linye, sinalo iqela lokuthengisa elinobungcali ukujongana naphakathi kweshishini lesizwe. 2.Ungandinceda ukuba senze eyethu uyilo okanye usebenzise uphawu lwam kwimveliso? Sinokwenza umatrasi ngokoyilo lwakho okanye ubonelele ngenkonzo ye-OEM nje ekufuneka usinike yona ubugcisa bemveliso okanye iifoto zophawu. 3.Ziphi iindlela zokuhlawula ozamkelayo? I-LC ngokubona / nge-TT, i-30% ye-Deposi kunye ne-70% yebhalansi ichasene neekopi zamaxwebhu okuhambisa iincwadi kwiintsuku ezisi-7 zomsebenzi. Into ebalulekileyo endifuna ukuyithetha: 1.Maybe yahluke kancinane kule nto uyifunayo. Ngapha koko, ezinye iiparameter ezinjengephethini, ulwakhiwo, ukuphakama kunye nobungakanani zinokuhlelwa ngokwezifiso. 2.Maybe udidekile malunga nokuba yeyiphi eyona nto ithengiswayo ethengisa intwasahlobo. Ewe, ngenxa yeminyaka eyi-10 yamava, siya kukunika iingcebiso zobuchule. Ixabiso lakho eliphambili le-3.O kukukunceda ukuba wenze inzuzo engakumbi. 4.Sonwabile ukuba sabelane nawe ngolwazi lwakho, thetha nathi nje. Malunga: I-Rayson Global Co, i-Ltd lilinge elidibeneyo le-Sino-US, elasekwa ngo-2007 elikwiDolophu yaseShishan, Foshan High-Tech Zone, kwaye limi kufutshane namashishini adumileyo anje ngeVolkswagen, iHonda Auto kunye neChimei Innolux. malunga nemizuzu engama-40 ngemoto ukusuka eGuangzhou Baiyun kwiSikhululo senqwelo moya kunye neCanton Fair Exhibition Hall.
Ukusetyenziswa okuqhubekayo kwamacala omatshini wasentwasahlobo oPrice-Rayson
Rayson kwiRayson yeZowuni yoShishino, eHuasha Road, eShishan, eFoshan High-Tech Zone, eGuangdong, China Iimveliso eziphambili Amacala aphindwe kabini asetyenziswayo oomatrasi basentwasahlobo abaPrinta-iRayson Le mveliso ayisiyonto nje ibekwe kwindawo kodwa igqibezela indawo. -Utshilo omnye wabathengi bethu.
I-China umqamelo ophezulu we-bonnell intwasahlobo abavelisi be-mato-Rayson
I-Rayson kwi-Rayson Zone Industrial Zone, Huasha Road, Shishan, Foshan High-Tech Zone, Guangdong, China. Iimveliso eziphambili China umqamelo ophezulu we-bonnell intwasahlobo abavelisi-. Umqamelo umphezulu womatshini wohlobo lwe-bonnell uqinile kumaxesha amaninzi wokuhlamba, ke unokusetyenziswa njengesiqhelo. Ukusebenza kwemveliso kuphuculwe kakhulu liqela lethu le-R&D. umcamelo ophezulu we-bonnell mattress yasentwasahlobo URayson uhambe kuhlolo olungqongqo. Olu hlolo lubandakanya amacandelo anokufaka iminwe kunye namanye amalungu omzimba; imiphetho ebukhali kunye neekona; ukucheba kunye nokucheba amanqaku; uzinzo, amandla okwakha kunye nokuqina.
Gel Memory Foam & Umatshini oMathumbu oMdumba oMdaka oMeleleyo
Imemori yeGel Memory Foam & Umatshini oMathumbu oMdumba oMdaka oMeleleyo URAYSON uza kukubonisa ngeenkcukacha ezithile ze-mattress yasentwasahlobo.RAYSON ineendibano zocweyo zoqeqesho kunye netekhnoloji enkulu yokuvelisa. i-mattress yasentwasahlobo esiyivelisayo, ngokuhambelana nemigangatho yokuhlola umgangatho wesizwe, inesakhiwo esifanelekileyo, ukusebenza okuzinzileyo, ukhuseleko olufanelekileyo, kunye nokuthembeka okuphezulu. Ikwafumaneka kwiintlobo ngeentlobo kunye neenkcazo. Iimfuno ezahlukeneyo zabathengi zinokugcwaliseka ngokupheleleyo. Izibonelelo zeNkampani 1. Imemori yeGel Memory Foam ye Rayson Mattress inkumbulo i-foil coil ye-coil ye-sprung idibana nemigangatho ephezulu kwimveliso yerabha kunye neplastiki. Le migangatho inyanzeliswa ngokungqongqo kwaye ibekwe esweni liqela lethu elizinikeleyo. 2. Le mveliso inokwakhiwa okuzinzileyo. Ubume bayo kunye nokuma kwayo akuchaswanga ngumahluko wobushushu, uxinzelelo, okanye naluphi na uhlobo lokungqubana. 3. Hard Foam ingavalelwa umatrasi bonisa ukugcinwa ngokulula. Isebenzisa iziphelo ezinokuchasana okuhle kwezinyibilikisi eziqhelekileyo kunye nokususa amabala athile ngala manzi amkelekile. 4. Le mveliso inokuthenjwa kwaye yomelele ayifuni ukulungiswa okuphindiweyo ngexesha elifutshane. Abasebenzisi banokuqinisekiswa ngokhuseleko xa beyisebenzisa. 5. Imveliso yenzelwe ngendlela yokwenza ubomi babanye abantu bube lula kwaye bube lula ngakumbi kuba bunikezela ubungakanani obufanelekileyo kunye nokusebenza.
Ixabiso eliphantsi kakhulu le-bonnell mattress yasentwasahlobo
Ixabiso eliphantsi le-bonnell mattress yasentwasahlobo + https: //www.raysonglobal.com.cn